Ukuphupha ngewigi Discover Discover Discover online ▷ ➡️
Iwigi ifihla iinwele zethu zokwenyani kwaye inokusinika ukujonga okutsha. Ngokuqhwanyaza isihlahla, i-blonde inokujika ibe yi-brunette okanye umntu onee-curls ezimnyama angajika abe bomvu. Yinto yokufikelela kwiklasikhi yabantu beqonga lemidlalo yeqonga, kwaye ihlala isetyenziswa ngabantu abafuna ukutshintsha isazisi sabo okanye abafuna ukufihla. Ke iwigi ihlala inxulunyaniswa nenkohliso. Kwangelo xesha, inokuba yinxalenye yobuntu obuqaqambileyo kwaye inike imvakalelo yokuhombisa.
Olo tshintsho lweenwele luyathandwa kwimibhiyozo efana necarnival okanye iMardi Gras, ehambelana nesinxibo esikhethiweyo. Ukuba kwelinye icala ufuna iwigi yemihla ngemihla ejongeka njengendalo ngangokunokwenzeka, yiya kwindawo yokucheba iinwele okanye kwingcali yeqela kwaye iharness inokulungiswa ngokwahlukeneyo kwaye isikwe kubungakanani. Ezi wigi zibiza kakhulu zihlala zenziwe ngeenwele zokwenyani ezikumgangatho ophezulu, ngelixa isinxibo sesinxibo senziwe ngeplastikhi, kunqabile ukuba uphefumle kwaye uqalise ukurhawuzelela ngokunxiba ixesha elide.
Ukuba yitoupee, iinwele ezingezizo ezomeleleyo zisebenza ukongeza inkangeleko kunokuyitshintsha ngokupheleleyo. Iwigi inokunceda abantu abanomhlaza, umzekelo, ukugcina okanye ukubuyisa ukuzithemba kwabo ngokukwazi ukumboza kwakhona intloko ephawulwe sesi sifo ngeenwele. Ke ngoko, iwigi inokufeza imisebenzi emininzi eyahlukeneyo.
Yeyiphi inqanaba enalo njengophawu lwephupha?
1 Uphawu lwephupha «iwigi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iwigi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iwigi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iwigi» - ukutolikwa ngokubanzi
Kakhulu, iwigi luphawu lwephupha isanga kunye nokuxoka. Ukuba iphupha libona iwigi okanye linxitywe ngabanye, iphupha liyalumkisa ukuba ungalahlekiswa. Amayelenqe anokujikwa kuye kwaye kufanele ukuba akhohliswe. Ukuziva ungonwabanga kunokuzenza uzive ngale ndlela ephupheni.
Ukuba uyinxiba ngokwakhe, iwigi imele inyani yokuba unxiba ezisingqongileyo. Oku ukufihla Nangona kunjalo, unokuxoka ngokulula. Mhlawumbi iphupha linoluvo lokungabalulekanga kunelinye. Oku kuyinyani ngokukodwa kumaphupha e-toupee. Njengoko igubungela intloko, i-wig ngamanye amaxesha itolikwa ukuba ithetha ukuba iphupha lizenza ngathi liyasisithukuthezi kunaye, lifihla ingqondo yakhe okanye iingcinga ezizilumko kwabanye.
Ukuba ulahlekelwa yi-wig yakho ephupheni, uyavezwa, mhlawumbi nasesidlangalaleni, kwaye kwinqanaba elithile awunakuzinceda. Kule meko, iphupha lingangumqondiso wokuba abantu, abalichasayo eli phupha, bayaliyeka okanye bayoyika ukuhlekwa. Mhlawumbi ufumene ingozi owaziyo ukuba iya kukhokelela kwabanye Hohn y Kuhlekisa iyakuthatha.
Uphawu lwephupha «iwigi» - ukutolikwa kwengqondo
Kukwatolikwa ngephupha ngokwasengqondweni, iwigi ime njengophawu isanga y iinyani zobuxoki. Ngokunokwenzeka ukuphupha akunikezeli phambi kwabanye abantu njengoko kunjalo, kwenza, umzekelo, umncinci, ucebile okanye uzama ukubonakala ngathi unobuhlakani okanye ufundile. Unokuba nezakhono zokuloba ongenazo okanye uzihombise ngeentsiba zomnye umntu ozenza ngathi zezabanye abantu njengempumelelo yakho. Iphupha liyalumkisa ukuba ungayi kude kakhulu nenkohliso.
Iwigi ingabonisa ukuba iphupha likunye papel uziva engonwabanga ekuhlaleni kwaye uyamkhumbula umntu wakhe wokuqala. Ngapha koko, ifuna ukuthembakala ngakumbi.
Ukuba abanye banxiba iwigi ephupheni lakho, uyoyika ukukhohliswa ngoontanga bakho. Ngamanye amaxesha i-subconscious ithatha ubuqili, phantse izinto ezingabonakaliyo. Iimpawu zesilumkiso emva koko ibajike babe yimifanekiso yamaphupha. Ukuphupha akukhathazi ukumamela imeko yakho kwaye ulumke kubudlelwane phakathi kwabantu okanye nabantu oqhelene nabo.
Uphawu lwephupha «iwigi» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, iwigi imele ephupheni. igunya. Ukuphupha kungakuthatha oku njengethuba lokucinga ukuba ujonge bani kwaye umhloniphile ebomini bakho njengegunya. Ngokunokwenzeka umfanekiso wephupha luphawu lwento enye. umcebisi ngokomoya.